Ogaden News Agency (ONA) – Shir wada-tashi ah oy qabatay jaaliyada Sacuudi Carabiya faraca Riyaad
Shir wada-tashi ah oy qabatay jaaliyada Sacuudi Carabiya faraca Riyaad
Posted by ONA Admin	/ September 7, 2013
Waxaa shir kala warqaadasho ah isugu yimid jaaliyada Sacuudiga faraca Riyaad 6/9/2013 oo ku saabsanaa warbixintii Kalfadhigii lixaad ee Golaha Dhexe.
Waxaa shirka furay gudoomiyaha faraca mudane Maxamed ka dibna waxaa la akhriyay aayaado quraanka kariimka ah iyo wacdi diiniya oo uu soo jeediyay sh Axmed isagoo ku baraarujiyay dadkii ka soo qaaybgalay shirka Alla ka cabsi iyo fadliga uu leeyahay jihaadka ka socda Ogadenya. Intaa kadib waxaa lagu soo dhoweeyay hadlka isuduwaha jaaliyadaha Bariga Dhexe mudane C/lahi Axmed (ciraaqi) oo sifiican uga warbixiyay hawlihii kalfadhigii 6/ee Golaha dhexe iyo go’aamadii la gaadhay oo uu ka hor akhriyay shirka. Waxaa kale oo uu la socodsiiyay dadkii shirka fadhiyay halganku meesha uu marayo gudo iyo dibadba. Jaaliyadda ayaa si fiican u soo dhaweysay oo taageertay go’aamada ka soo baxay Kal-fadhiga.
Waxaa isna shirka kaga soo qaaybgalay khadka taleefanka mudane C/lahi ugaas Muxumed Qani oo uga waramay guulihii ka soo baxay kalfadhigii lixaad ee Galaha dhexe iyo habsamidii uu shirka u socday, una gudbiyay bogaadintii jaaliyadda Sacuudiga looga soo jeediyay Kalfadhiga.
Waxaa xubnaha shirka ka soo qaybgalay go’aamiyeen in la isagarabtaago halganka xaqa ah ee lagu xoreeynaayo dalka Ogaadeeniya ee JWXO hormuudka ka tahay, lagana digtoonaado shirqoolqda cadowga iyo dabadhilifka gumaaysiga uu soo diro, lana ilaaliyo midnimada umada iyo iskuduubnida jaaliyada.